INgha N'Ọdịnaya anaghị erere ọdịnaya | Martech Zone
Wenezdee, Machị 19, 2014 Wenezdee, Machị 19, 2014 Douglas Karr
Na isoro otu ụlọ ọrụ na-ewepụta ọdịnaya dị ukwuu na-ekwurịta okwu, ha tụlere na ụfọdụ n'ime echiche ọdịnaya ha ji gbagoro ọkọlọtọ agọnahụla n'ihi na ọdịnaya ahụ emeghị ozugbo emetụta ire ere nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha. Ug. Kedu usoro atụmatụ ọdịnaya jọgburu onwe ya. Ọ bụrụ na ebumnuche nke ọdịnaya gị ọ bụla bụ ire ihe, ị nwere ike mechie blog ma zụta mgbasa ozi.
Ekwela ka m mehie - ụfọdụ ndị nọ ebe ahụ na-achọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ga-enyere ha aka idozi nsogbu ma nwee ọdịnaya kachasị mma nke na-akpali ha ịre. Ma ọ bụrụ ọ bụla otu ọdịnaya na-anwa ịchụga ha n'ire, ị naghị enye ndị na-ege gị ntị uru ọ bụla.
Aga m enye ụfọdụ ihe atụ:
TinderBox - sistemụ ha na-eme ka ọrụ na-agwụ ike nke ide ederede na nkwekọrịta ahaziri iche na ndị ahịa, na-enye ohere ịza ajụjụ, ntinye uhie na ntinye aha dijitalụ. Ọ bụrụ na ihe niile ha dere banyere ya bụ atụmatụ ha kwa ụbọchị, ọ nweghị onye ga-abịa na saịtị ha. Agbanyeghị, ha na-ede edemede ndị na-adọrọ mmasị nke na-enye ndị isi ahịa azụmaahịa na-abịaghachi ugboro ugboro gụọ ọdịnaya ha.
Mindjet - nyiwe ha na-enye ohere maka idekọ, imekọ ihe ọnụ, ịdepụta uche na ọbụlagodi njikwa ọrụ. Ebe nrụọrụ ha anaghị asụpụta kwa ụbọchị etu ngwaahịa ha si dị mfe iji mee uche, ha Chọta blog na-ekerịta ọdịnaya dị ịtụnanya na ihe ọhụrụ na mmetụta ya n'ebe ọrụ. Ọ bụ otu n'ime akụrụngwa kachasị maka echiche na ihe ọhụrụ na ịntanetị.
Right Na mmekọrịta - ha na-ere ahịa akpaaka ngwanrọ… ma blọọgụ ha na-agwa ndị ahịa ndụ, ịzụrụ okirikiri, ọnụ ahịa ndị ahịa, njigide ndị ahịa na nsogbu ndị ọzọ buru ibu. Ọ bụ ezie na ndị na-asọ mpi ha na-ekwukarị banyere ihe ndị ọzọ na-eduga n'elu olulu ahụ, Right On Interactive na-etinye usoro dị iche - na-akọwa otu esi achọta ndị ahịa bara uru karị ma ha ga-anọnyere ụlọ ọrụ gị iji bulie nloghachi na ego.
Ndepụta Angie - na-enye nyocha miri emi nke ndị na-enye ọrụ tụkwasịrị obi n'ihi na ha abụghị ndị a na-amaghị aha na ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ iji gbasaa ma hụ na ahụmịhe ọrụ dị mma maka ndị debanyere aha ha. Mana saịtị ha na-enye ọtụtụ ozi gbasara ụlọ ọrụ, ndụmọdụ onwe gị maka ndị folks, yana ndụmọdụ siri ike maka ndị na-enyocha mkpebi ịzụta ọzọ. Ha anaghị ere ndenye aha ha na ọdịnaya ha, ha na-agbatị ntụkwasị obi ndị ahịa nwere na ha ma na-enye uru karịa nyocha.
Ka onye na-agụ ya na-agụ isiokwu ndị ahụ, ha na-ebido ịnabata na ụlọ ọrụ ahụ ghọtara ihe ịma aka na nkụda mmụọ ha. Site na ọdịnaya ahụ, onye na - agụ ya na - enweta uru ọzọ site na ụlọ ọrụ, na - ewulite ntụkwasị obi na ụlọ ọrụ NA, na ngwụcha, ohere ịghọ ndị ahịa abawanye ụba. Ebumnuche nke imirikiti ọdịnaya abụghị ozugbo ere onye ahụ, ọ bụ iji gosi ha nka gị n’ọrụ ha, igosi ha ikike gị, ndu gị, na inye uru karịa ịzụrụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ.
Mgbe ị mechara nke a, ọdịnaya gị na-ere.
ngosi: Companieslọ ọrụ ndị edepụtara n'elu bụ ndị ahịa niile nke anyị.
Tags: ire ahịaNkwado ire ahịa